किन ढिलो बोलेको भन्नेलाई साम्राज्ञीले दिइन् यस्तो जवाफ - Rajmarga
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले फिल्मी क्षेत्रबारे आफूमाथि भएका दुव्र्यवहारका बारेमा खुलासा गरेकी छिन्।
यस बारेमा उनले एकपछि अर्को भिडियो पोस्ट गर्दै १७ वर्षको उमेरदेखि आफू दुव्र्यवहारको शिकार हुनु परेको भन्दै धेरै कुरा खुलाएकी छिन्। आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको सत्यता आफूले निकै साहस गरेर सार्वजनिक गरेको बताउने सामाज्ञीलाई धेरैले त्यति बेलाका कुरा किन ढिलो बताएको भएर पनि प्रश्न गरे।
ढिलो कुरा बताएको भन्नेलाई सामाज्ञीले गतिलो जवाफ दिएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘म पागल छु ? यति ढिलो बोल्न ? मैले पहिले नै यसबारे बोल्न खोज्दा मलाई धेरैजनाले रोक्नुभयो। एउटा अन्तरवार्तामा मैले यसबारे थोरै कुरा कोट्याउँदा पनि मेरो संघर्षलाई घुमाएर मलाई नै नराम्रो बनाउन खोजियो।
बुधबार बेलुका आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा भिडियो पोस्ट साम्राज्ञीले भनेकी छिन्, मेरो कुराले परिवार दुखी हुनुभयो। किनकी उहाँलाई नराम्रो यसकारण लाग्यो । उहाँहरुलाई सही कुरामा पनि यति धेरै ‘पावर र पोलिटिक्स’ चल्ने कुरा र साँचो कुरालाई तोडमाड गरेर आफैंलाई नराम्रो बनाइने कुरा थाहा भयो । उहाँहरु दुःखी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँहरुले नै यस्तो कुरा छोड्न भन्नुभयो।’
आफ्नो परिवारलाई दुःखी नबनाउनका लागि आफू चुप लागेको उनले बताएकी छिन्। उनी थप्छिन्, ‘एक त बच्चा थिएँ, मैले सही कुरा गर्दा पनि मान्यता दिँइदैन रहेछ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा सेट भयो।’
आफूले नयाँ मान्छेहरुसँग, राम्रो फिल्ममा अभिनय गरेपनि पहिलेको कुराले आफूलाई कताकता नराम्रो काम गरेको जस्तो भान हुन थालेको उनी बताउँछिन्। क्वारेन्टिनको बेलामा आफ्नो दिमागमा पुराना कुराहरु खेल्न थालेपछि आफूले साहस गरेर सबै कुराको खुलासा गरेको उनको भनाइ छ।
आफ्ना भावना शेयर गरेपछि आफूलाई निकै हल्का महसुस भएको पनि उनले बताएकी छिन्।
Previous post:मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्ने
Next post:राष्ट्रपतिले राजनीतिक संकट बढ्ने गरी कदम चाल्न नहुनेः प्रचण्ड